WSL yatove kuratidza kunyorera neGUI uye zvave nyore kuisa | Linux Vakapindwa muropa
Kutarisira kuvenga pabasa, ndinofanira kutaura kuti chinyorwa ichi chiri nezve tekinoroji yeMicrosoft inomhanya pane Windows 10, asi zita rake riri Windows Subsystem yeLINUX; iwe unofanirwa kutarisisa kune icho chikamu muzvakanyorwa. Akatsanangura izvi, kunyangwe zvaisafanira kunge zvichidikanwa, kubvira nezuro WSL yaunza akati wandei enhau anonakidza, imwe yacho iri nhanho yekutanga yeLinux mukati meWindows kutarisa zvishoma Linux kupfuura zvino.
Kuti utaure zvishoma, aiwa, idzi nhau hadzisi dzepamutemo, ndiko kuti, havasati vasvika yakagadzikana vhezheni yeWindows 10.Vakasvika nezuro sechikamu che Windows 10 Vaka 20150 uye vakazviita kumhete yekutsanya (Fast ring), yava kunzi Dev Channel, yevaImukati, isu vedu tine timu neMicrosoft system yakanyoreswa kuchirongwa icho chinotibvumidza kuona nhau dzavari kushanda isati yatanga. Pakati pezviviri zvatichataura muchinyorwa chino, hutsva hunonyanya kushamisa ndohwekuti vanogona kuva mhanya zvishandiso zveLinux neGUI muWSL2.
1 Microsoft neNVIDIA inounza CUDA kuWSL2
2 wsl.exe -install, iyo yekumisikidza yekuraira yakareruka
Microsoft neNVIDIA inounza CUDA kuWSL2
Sechikamu chekuvandudza, ikozvino WSL mune yayo yechipiri vhezheni inogona kuita GPU-yakavakirwa komputa mabasa, iyo inosanganisira kushandiswa kweNVIDIA CUDA tekinoroji. Izvi, uye iyo nyowani yekumisikidza yekuraira yatichataura nezvayo gare gare, yakafambiswa mberi mumusangano iyo Microsoft kupemberera muna Chivabvu
Microsoft yakabatana neNVIDIA kuendesa kutanga kwekutanga kweNVIDIA CUDA yeWSL2 (mamwe mashoko), iyo inosanganisira muchina-kudzidza rutsigiro rweyakakurumbira ML maturusi, maraibhurari, uye masisitimu, akadai sePyTorch neTensorFlow. Microsoft inopawo TensorFlow package ine DirectML backend. Kune rimwe divi, AMD yakaburitsawo preview vhezheni yayo yemadhiraivha ekuvhura DirectX 12 GPU yekumhanyisa rutsigiro mukati meWSL yeboka rakanaka reRadeon Hardware.
wsl.exe -install, iyo yekumisikidza yekuraira yakareruka
Iyo imwe inotonhorera ficha ndiyo nyowani WSL yekuisa uye yekuvandudza murairo. Kusvikira ikozvino waifanirwa kuisa akati wandei ayo asingatomboiti kurangarira, asi ikozvino ichaiswa nekuvhura chete Windows PowerShell uye kupinda iyo nyowani wsl.exe -install. Iyo yekumirira yekumisikidzwa yekumisikidza inofanira kuve ipfupi, asi mamwe matanho, kusanganisira kuenda kuMicrosoft Chitoro uye nekuisa kugoverwa kweLinux, zvakafanana.
Pamwe pamwe nemirairo yapfuura, ivo vaunzawo zvinotevera:
wsl.exe - update ichagadzirisa iyo kernel.
wsl.exe -update -status ichatiratidza mamiriro enjodzi.
wsl.exe -update -rollback izvo zvinotibvumidza isu kuti tidzokere kune yapfuura vhezheni yekernel.
Asi izvi hazvifanirwe kunge zvichidikanwa, kana zvese zvikashanda zvakanaka uye isu tisingade kudzokera kune yekare vhezheni yekernel, nekuti izvozvi zvinyorwa zvinouya kubva kuWindows Kugadziridza yeiyo inoshanda sisitimu senge chero imwe yekuvandudza isingatsamire paMicrosoft Store. Nhasi, kunyangwe vazhinji vedu tichiramba tichida yemuno neyechinyakare Linux, yeInsiders, Windows 10 yatora rimwe danho padhuze neLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » WSL yatove kuratidza kunyorera neGUI uye zvave nyore kuisa